Kilalao an'Ankizy - Tsarabika
Misy entana 31 isa.
Ampisahoy sahafy an'ireo zaza ny endrika fanaovana ireny mofo mamy, milokoloko ireny. Ireto misy "pâte à modeler" ahafahana manao izany. Mitovy amin'ireny tena izy ireny mihitsy izay zavatra vita amin'ity kilalao iry. Efa miara aminy avaoko ireo kojakoja rehetra ilaina amin'ny fanamboarana toy ny "moule, socle..." ary ireo "pâte à modeler" amin'ny loko maro.
Ity indray ny saka kely elektronika, mitovy amin'ireny tena saka ireny mihitsy izy, saingy tsy hatahorana raha lalaovin'ny zaza. Tsy mandrangotra, tsy manao maloto eny rehetra eny, tsy mileledelaka, saingy mihirahira kosa anefa, ary afaka mandende erany trano.
Ity indray ny "trottinette" ho an'ireo zaza mihoatra ny telo taona. Tena mafy tsara izy ity, ary mahazaka midonadona. Manana kodiarana hefatra izy, izay mipetraka eo amin'ny plastika fotsy azo itahina izay tena mafy tsara ihany koa. Miendrika soavaly kely izy, ary mora lalaovina. Miloko fotsy sy mavokely.
Saribakoly kely mitovy amin'ireny tena zazakely ireny mihitsy. Mety indrindra ra ho an'ireo zazavavy kely, hatao fanomezana na atao kilalao fotsiny. Efa misy ireo zavatra sy kojakoja rehetra miaraka aminy toy ny, kitapo kely, ny "couche", ny "pot", ny "biberon", sy ireo izay ilaina rehetra momba ny zazakely. Tena tsara ity kilalao ity, ary mahafak'andro...
Kilalao manitatsaina ho an'ny ankizy. Tena mahafinaritra satria sady mialalo ny ankizy no afaka mampiasa saina ihany koa. Vita avy amin'ny plastika ity kilalao ity, ary misy pitsopitsony kely atambatambatra mba ahazahoana kialalo mivaingana toy ny "super heros"
Fitaovana tena ilaina ny "bouée" raha andeha hilomano, na any amin'ny ranomasina na eny amin'ny "piscine" ity ary ny "bouée gonflable". Miendrika biby mahafatifaty, toy ny sokatra kely, na vorona, ary misy lokoloko mahasarika ny mason'ny ankizy. Mora ampiasaina izy ireto, ary mora ampirimina ihany koa. tena mety ho an'ny ankizy kely
Kilalao kely mahafinaritra sy afaka miovaova ity « transformer » miendrika fiara manidina kely ity. Ireo izay mpankafia sy tia itony karazana kilalao azo kitikitihina itony, dia tena ahazo tombony tokoa, satria kilalao iray izy, anefa afaka ovaovaina ny endriny. Vita avy amin’ny plastika izy, ary tena mety ho an’ny ankizy.
Kilalao kely mahafinaritra sy afaka miovaova ity « transformer » miendrika sambo kely ity. Ireo izay mpankafia sy tia itony karazana kilalao azo kitikitihina itony, dia tena ahazo tombony tokoa, satria kilalao iray izy, anefa afaka ovaovaina ny endriny. Vita avy amin’ny plastika izy, ary tena mety ho an’ny ankizy.
Kilalao kely mahafinaritra sy afaka miovaova ity « transformer » miendrika fiara kely ity. Ireo izay mpankafia sy tia itony karazana kilalao azo kitikitihina itony, dia tena ahazo tombony tokoa, satria kilalao iray izy, anefa afaka ovaovaina ny endriny. Vita avy amin’ny plastika izy, ary tena mety ho an’ny ankizy.